अर्धनग्न शरिर देखेपछि - Nepali Sex Tube
अर्धनग्न शरिर देखेपछि
मेरो नाम शान्ति, म दिदी सँगै कलंकीमा बस्छु, म चौबिस बर्षकि भएँ। आज जुन घटना लेख्दैछु यो मेरो पहिलो चिकाइ भने हैन किनकी मेरो आफ्नै ब्वाइफ्रेन्ड रहेको छ र उ सँग मेरो शारिरिक सम्पर्क भैसकेको छ, तर मेरो एकदमै मिल्ने साथी मुनाको भर्खरै विवाह भएको केटा प्रकाश सँग चिकाउदाको ताजा कान्ड राम्रो लागेर शेयर गर्दै छु । यो कथा राम्रो लागे तपाईं पनि शेयर गर्नुहोला ।
मेरो साथी मुनाको मागि विवाह भएको थियो, उनको परिवारले यो विवाह पक्का गर्देको हो। मुनाको पनि ब्वायफ्रेन्ड त थियो तर ब्रेकअप भएको थियो । हामी एकदमै मिल्ने साथी भएको हुनाले प्राय सबै कुराहरु शेयर हुन्थ्यो। तर उनको विवाह भएकोले मैले उनको बुढा सँग चिकाएको कुरा भने भनेको छैन । थाहा पाइन भने बरबाद हुन्छ त्यसैले कसैले पनि भनिदिनुहोस् है मुनालाई ।
विवाह भएपछि पनि उनिहरु काठमाडौं नै बस्थे तर कोरोना भाइरस आएपछि मुना गाउँ गएकि छिन्। उनको बुढा भने लकडाउन भएपछि यतै रोकिएका हुन। उनको बुढाको नाम प्रकाश हो, उ एकदम हेन्डसम लाग्छ मलाई । मेरो मिल्ने साथीको केटा भएकोले प्रकाश र म पनि साथी नै भयौँ । मुनालाई भेट्ने बहानामा उनिहरुको रुममा प्राय जाने गर्दथें तर त्यहाँ पुगेपछि मुनासँग मात्रै भेट्ने कुरा भएन बरु प्रकाश सँग पनि गफ, ख्याल ठट्टा हुन्थ्यो। प्रकाशले कहिलेकाहीँ मलाई फोन मेसेज पनि गर्थ्यो तर सामान्य तरिकाको । मुना गाउँ गएपछि भने म उसको कोठामा गाको थिइन किनकी म केटी मान्छे हुँ केटा मात्र भएको कोठामा कसरी जानु जस्तो लाग्थ्यो । मेरो विचारमा प्रकाशलाई भने बुढी नभएको बेलामा म आइदेको भए नि हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने रहेछ । एक दिन प्रकाशले मलाई मेसेज गरेको रहेछ । मेसेजमा लेखिएको थियो, “कता हो आजकल त आउदिनौ त, आज जसरी नि आउ न है।” भनेर । मलाई पनि भेट्न मन त थियो तर मुना नभएकोले अप्ठ्यारो लागेर मात्र नगएको हुँ । लकडाउन भएपछि कहिँकतै निस्किएकी थिइन, जहिल्यै कोठामा बस्दा बस्दा बोर लागिरहेको थियो। एक्कासी प्रकाशले भेट्न बोलाउदा कौतुहलता पनि लाग्यो, किन बोलाको होला भनेर । अनि दिदीलाइ मेरो काम छ भनेर म हतार हतार बाहिर निस्किएँ……..
म सिधै प्रकाशको कोठामा गएं र ढोका ढकढक गरें । प्रकाश एक्लै थियो । उ भर्खरै नुहाएर तौली बेरेर बसेको रहेछ…….
मलाई प्रकाशको अर्धनग्न शरिर देखेपछि लाज पनि लाग्यो तर उसको सेक्सी शरिरले मलाई इमोशनल उत्तेजित पनि गरायो…….. मैले सोचे अाखिर साथी त हो नि त्यही माथि अरु कोही छैन क्यारे । ढोका लगायो अनि उसले त मलाई च्याप्प समातेर अंकमाल गर्यो। म सक्ड भएँ, अनि के गरेको? भनेँ …..
रिसाए जस्तो गरेँ तर मनमा सेक्स इमाेशन बढीसकेको थियो……….
प्रकाशले मलाई छोड्दै छोडेन ….
अनि जबरजस्ती उसको खाटमाथी सुताएर किस गर्न थाल्यो………..
म त झन सिक भएँ अब केको रिसाउनु अाखिर मलाई नि चाहिएकै थियो, म नि लाइनमा आएँ र किस गरिदिएँ । म त पुरै कपडामा थिएँ तर प्रकाशको त बेरेको टावल मात्र त्यहि पनि खाटमा पल्टिदा सोर्हिएछ, मैले उसको लाँडो देखिहालेँ ………. वाउ भर्खरै नुहाएको सफा, रन्केको सप्रेको लाँडो थियो। किस गर्दै मैले प्रकाशको लाँडो समातेर खेलाउन थालें ।
एकछिन पछि हाम्रो पोजिसन चेन्ज भयो…प्रकाश मेरो माथि चढ्यो अनि मेरो मुखमा उसको जिब्रो हालेर किस गर्न थाल्यो ……….
किस गर्दै अब त मेरो दुध मसाल्न थाल्यो……., दुध माड्दै अब मेरो घाँटीतिर किस गर्न थाल्यो ………ahhhhh प्रकाश ahhhhhh फक मि ahhhhhh भन्दै कराउन थालेछु……….
प्रकाशले एकदम जोड जोडले उफार्दै मेरो दुधको मुन्टा सक गर्न थाल्यो… ahhhhhh ohhhhhhhh, ummmmmmm…
थाहै पाइन कति बेला लुगाबाट दुधको पोका बाहिर निकालेको । अब त मलाई सबै कपडा फुकालेर नांगै बनायो, प्रकाश त पहिल्यै नांगै थियो…
प्रकाशले मेरो पुतीमा अौला हालेर चलाउन थाल्यो………
ahhhhhhh प्रकाश ohhhhhhhhh
एकदमै जोड जोडले झड्का दिएर अौला हाल्दै निकाल्दै गरेर सिक बनायो उसले मलाई……………….. ahhhhhh
त्यसपछि मेरो खुट्टा फट्याएर पुती चुस्न थाल्यो…ahhhhhh, ohhhhhhh
उसको सफा लाँडो मलाई पहिल्यै चुस्न मन थियो त्यसैले मैले नि उसको ठन्केको लाँडो ग्वाम ग्वाम पारेर चुसिदिएँ …………
उ पनि अति सिक भयो, चुस्दा चुस्दै फुसी झर्ला भनेर मैले भयो अब मेरो पुतीमा लाँडो हालेर चिक भनेँ । उसले मेरो पानी पानी भएको पुतीमा आफ्नो लाँडो हुल्यो, बल्ल मलाई रिलिफ भयो…………
बल्ल मेरो चाहना पुरा हुन लागेको जस्तो भयो……………………………
पहिले नै चिकेको पुती भएर होला दुख्ने, लाँडो नछिर्ने त कुरै भएन, भित्र सम्म पुग्ने गरि क्वाँच क्वाँच क्वाँच क्वाँच पारेर लाँडो भित्र बाहिर गर्न थाल्यो …………………ahhh
अझै अझै भन्दै कराउन थालेछु harderahh प्रकाशले झन फुल स्पिडमा दनादन उफार्दै चिक्न थाल्यो……
म त आनन्दले बेहोस जस्तै बनेकी थिएँ…ahhhhhhhhh, ohhhh
करिब पच्चीस मिनेट जति चिकेपछि प्रकाशले लाँडो बाहिर निकाल्यो, मैले हत्तपत्त उसको लाँडो मेरो मुखमा हालेँ र उसको फुसीले मेरो मुख भरियो……………………
अनि थाकेको महसुस भएकोले केही समय हामी आराम गर्यौँ, एकछिन हामीबिच गफगाफ भयो……………..
दुवै जनाको सहमतिमा यो काम भएकोले पछि केही समस्या नहोस् भन्ने कुरा भयो…
म यौन चौतारी पाठक भएकोले कोठामा फर्किनासाथ यो सब घट्ना लेखेर पठाएको हुँ । मलाई आजकल धेरै चिकाउन मन लागिरहन्छ। अहिले त झन कर्फ्यु लागेको छ काठमाडौंमा । कर्फ्यु खुल्नासाथ म फेरि चिकाउन जान्छु होला प्रकाशको कोठामा, लकडाउन खुलेर उसको बुढी नअाउन्जेल मेरो यौन प्यास उसले मात्रै हो मेट्ने । मित्रहरु, तपाईंलाई मेरो यो रियल सेक्स अनुभब कस्तो लाग्यो, कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला । राम्रो लागे Like र Share पनि गर्नुहोला ।